အစုံအလင် Archives - Online Hartha
သပိတျမှာ လူစုခှဲပွီးကိုယျလဲအသညျးအသနျပွေးနတေဲ့အခြိနျကှမျးယာရောငျးနတေဲ့ အမကွီးတဈယောကျကပွေးထှကျလာသောအခါ
June 21, 2021 by Online Hartha
ဒီနေ့သပိတ်မှာစခတွေရောက်လာလို့ လူစုခွဲပြီးကိုယ်လဲအသည်းအသန်ပြေးနေတဲ့အချိန် ကွမ်းယာရောင်းနေတဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်ကပြေးထွက်လာပြီး “မောင်လေး မောင်လေး ကားခယူသွား”ဆိုပြီး ၅၀၀၀တန်လေးအတင်းကမ်းပေးသွားတယ် (ကိုယ်လဲရှယ်ပြေးနေရတာမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တောင်မပြောလိုက်ရဘူး☹) ပြေးဝင်ဖို့လမ်းကြားမရှိတော့ ကားလမ်းမအတိုင်းပြေးနေရင်း taxiတစ်စီးက ခရီးသည်ပါနေတာကိုတောင်ရပ်ပေးတယ် ကားပေါ်ပါလာတဲ့ အန်တီကြီးကလဲ သားတို့မြန်မြန်တက်ဆိုပြီး တံခါးပါဖွင့်ပေးတယ်… ကားပေါ်မှာလဲ သားတို့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာထိပို့ပေးမယ် ကလေးတွေကိုလုံခြုံတဲ့မှတ်တိုင်ကိုပို့ပေးပါဆိုပြီး အန်တီကြီးကတဖွဖွပြောတယ် taxiဦးလေးကြီးကလဲ ကားပေါ်မှာ အားပေးစကားတွေပြောတကယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်…. ကားဂိတ်ကိုပို့ပေးပြီး taxiခပေးတော့လဲ မယူဘူး “မင်းတို့တောင်အသက်တွေရင်းပြီးလုပ်နေတာ… ဦးလေးကဒါလေးကိုဘာလို့မကူညီနိုင်ရမလဲ ဒါဦးလေးစေတနာပါ လက်ခံပါ”တဲ့ဗျာ… တကယ်တကယ်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်… ဒီတိုက်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်မှာပါဗျာ…. ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်လဲဗျာ…။❤❤ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်…။ Unicode Version ဒီနသေ့ပိတျမှာစခတှရေောကျလာလို့ လူစုခှဲပွီးကိုယျလဲအသညျးအသနျပွေးနတေဲ့အခြိနျ ကှမျးယာရောငျးနတေဲ့ အမကွီးတဈယောကျကပွေးထှကျလာပွီး “မောငျလေး မောငျလေး ကားခယူသှား”ဆိုပွီး ၅ဝဝဝတနျလေးအတငျးကမျးပေးသှားတယျ (ကိုယျလဲရှယျပွေးနရေတာမို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့တောငျမပွောလိုကျရဘူး☹) ပွေးဝငျဖို့လမျးကွားမရှိတော့ ကားလမျးမအတိုငျးပွေးနရေငျး taxiတဈစီးက ခရီးသညျပါနတောကိုတောငျရပျပေးတယျ ကားပျေါပါလာတဲ့ အနျတီကွီးကလဲ … Read more
သှေးလှူရှငျ အံ့သွလောကျအောငျ ခေါငျးထောငျကွညျ့ခဲ့ရသညျ့ အဖွဈအပကျြလေးတဈခု
May 29, 2021 by Online Hartha
သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက်အောင်ခေါင်းထောင်ကြည့်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု… ကြည်နူးစရာပုရိပ်တစ်ခု…ဤပုံကိုကြည့်ပါ…..တန်ဖိုးသိသူတိုင်း မြင်နိုင်ပါသည်။ သွေးသည်အသက် အသက်သည်သွေး မိမိအသက်ရှင်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းပေးသော သွေးလှူရှင်အား လာရောက်ကန်တော့နေသည်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှ ကျေးဇူးတရား သိတက်ပုံကိုပြသလိုက်သည်မှာ သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက် အောင်ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမည်မှာ မလွဲဧကန်ပါ ဆင်းရဲပေမဲ့ကျေးဇူးတရားသိတက်လှပေသည်။သွေးတစက်၏တန်ဖိုးကို သိတက်သည့် လူဆင်းရဲ၏ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာသော သမီးဖြစ် နိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။တန်ဖိုးမသိက တန်ဖိုးဆုံရှုးနိုင်ပါသည်။တချို့သောသူများသည် မိမိအခက်အခဲမိမိအတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ကြသည်။ တချို့ကငွေဂုဏ်မောက်ပြီး မာန်တက်နေကြသည်။တချို့က မတူသလို မတန်သလိုဆက်ဆံကြသည်။တချို့က လိုသုံးလုပ်ကြသည်။ တချို့က မယုံကြည်သလိုနှင့်မေးခွန်းပေါင်းများစွာ မေးကြသည်။တချို့က ရန်တွေ့ကြသည်။လူအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ကျေးဇူတင်ရကောင်းမှန်း မသိကြပါ။ဤနေရာ ကျွန်ုပ်သာဆိုလျင် ဝမ်းသာပီတိမျက်ရည်ကျမိမှာ အမှန်ပင်…..ကလေးမိဘများလည်း ဝမ်းသာပီတိမျက်ရည်ကျမိမယ် ထင်ပါသည်။ ဒါဟာ ပရဟိတသမားများနှင့်သွေးလှူ ရှင်တို့ပီတိကိုစားအားရှိပါ၏။ သမီးလေးဘယ်မှာနေ၍ ဘယ်ဆေးရုံတက်နေသည်တော့ မသိပါ….နာမည်လဲ မသိပါ။ ဤပုံကိုတွေ့၍ … Read more
သခှားသီးအစား ပီလောပီနံဥ နှငျ့ကမွငျးမိတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျရဲ့အဖွဈ…
May 27, 2021 by Online Hartha
သခွားသီးအစား ပီလောပီနံဥ နှင့်ကမြင်းမိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ် အိမ် ရှင်မဆိုတော့လည်း အော်ဂဲနစ်စစ်စစ် လိုချင်တာပေါ့လေ။သဘာဝကပေးတဲ့ သစ်ဥသစ်ဖုတွေရှိနေရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ ကစားစရာတွေဝယ်ဦးမှာလဲ။ကစားစရာတွေအစား သခွားသီးတို့ ခရမ်းသီးတို့သုံးရင်လည်း အလုပ်ဖြစ်တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား?ဒါပေမယ့်လည်း သခွာသီးနဲ့ မရလို့ နဲနဲပိုအဆင့်တက်ပြီးတော့ ပီလောပီနံဥလိုအရာမျိုးကိုသုံးတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြတယ်။ အခုဒီအမျိုးသမီးလိုပေါ့.့ အကြောင်းကေတာ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မီးလိုဟုန်းဟုန်းတောက်နေတာပဲ။သခွားသီးမသုံးပဲနဲ့ ပီလောပီနံဥ အကြီးစားကြီးကိုသုံးလိုက်တာဆိုပဲ။ဒီအမျိုးသမီးကတော့ ကစားစရာကိုတောင်မှ အော်ဂဲနစ်နဲ့ လုပ်ထားတာကို မှ သဘောကျတဲ့ပုံပဲ..။ ဒီတော့ ပီလောပီနံဥကိုလည်း သခွားသီးလိုမျိုး ကစားစရာအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ တော်တော် ရယ်ရမလို ငိုရမလို ဖတ်ရင်းပြုံး ဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စပါ…နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့လို့ဆိုပါတော့မယ်… ဒါပေမယ့်လည်း အမြစ်တွေနဲ့ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ ကာအကွယ်သုံးတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမြစ်မွားတွေပြတ်ကျန်ခဲ့နိုင်တယ်လေ။ဒီအမျိုးသမီးဟာ ကာကွယ်ပြီး ဆော့ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် မတော်တဆ လက်ကလွတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ပီလောပီနံဥဟာ ကိုယ်ထဲမှာ ဝင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဆေးရုံကိုသွားပြီး … Read more
မိန်းကလေးတွေရဲ့လက်သည်းနီအရောင်က ပြောပြပေးမယ့် သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား
May 18, 2021 by Online Hartha
မိန်းကလေးတွေရဲ့လက်သည်းနီအရောင်က ပြောပြပေးမယ့် သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား (၁) အနီရောင် သင်ဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေကို နှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရမ်းချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ (၂) ပန်းရောင် သင်ဟာ လူတွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး လူ့အထှာနပ်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို လူစိတ်ဝင်စားအောင် တမင်တကာဖန်တီးရတာမျိုးကို မနှစ်သက်တတ်ပဲ ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ် နေလေ့ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ လူတွေကိုရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ဟာသဉာဏ်အပြည့်ရှိပါတယ်။ (၃) ခရမ်းရောင် သင်ဟာ သစ္စာရှိပြီး ဘုရင်မတစ်ယောက်လို ဘယ်အရာကိုမဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်မှာ ထားရှိသင့်တဲ့ မာနတရားတွေအပြည့်ရှိပြီး စွန့်စားမှုတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို မကြောက်မရွံပဲ လက်ခံတတ်ပါတယ်။ (၄) အကြည်ရောင် (သို့) အနုရောင် သင်ဟာ ရှုပ်ထွေးဆန်းပြားတဲ့အရာတွေကို မနှစ်သက်တတ်ပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေရတာမျိုးကို … Read more
မိနျးမမရတော့ဘူးလို့ ထငျထားပွီး တဈကယျလညျး လကျထပျရရော အရူးတဈပိုငျးဖွဈ (ရုပျသံ)
သူငယ်ချင်းတွေ့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲတွေကို (၇)ကြိမ်မြောက် သတို့သားအရံအဖြစ် ကူညီခဲ့ပြီးနောက် မိန်းမ ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ သူ့အဖြစ်ကို တွေးမိပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားမှာ ဝမ်းနည်းပက်လက် ရှိုက်ကြီးတငင်ငင်ငိုချလိုက်တဲ့ သတို့သားရဲ့ ရုပ်သံဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လျှပ်စီးလက်သလို တဟုန်ထိုး ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ပါ” လို့ ငိုသံပါကြီးနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို ပြောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ “ကျွန်တော့်အတွက် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းကို ခက်ခဲခဲ့တာပါ” လို့ ငိုကြွေးရင်းကနေ ပြောနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ သတို့သမီးကတော့ သူ့ကို ပြုံးကြည်နေ့ကာ မျက်ရည်တွေကို ပုဝါနဲ့ သုတ်ပေးနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ “ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းတွေ မင်္ဂလာဆောင်တိုင်း သတို့သားအရံအနေနဲ့ ၇ ခါတောင်လုပ်ခဲ့ရတာ။ အခုတော့ ကျွန်တော်တစ်ကယ် လက်ထပ်ရပြီပေါ့၊ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော် တစ်ကယ်မိန်းမရပြီပေါ့” … Read more
“သနေတျပွီးသော ငါးကွငျးအငျးဆရာတျော နှငျ့ K.N.U တပျမငျးကွီး ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခွငျး”
March 9, 2021 by Online Hartha
သထုံမြို့နယ်၊နောင်ကုလားရွာအနီးရှိ အလံတစ်ရာစေတီတော်၌ “လင်းထင်ဓမ္မရုံ” အမည်ဖြင့် ဓမ္မာရုံတစ်ဆောင်ရှိသည်။ ထိုဓမ္မာရုံ၏အလှူရှင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ဘဲ ကော်သူးလေ(ယခုအခေါ်) K.N.U, တပ် မဟာ(၅) မှ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တပ်မင်းကြီးလင်းထင်ဖြစ်သည်။ ထိုဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်လှူဒါန်းဖြစ်ခြင်း၏ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းမှာ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်- ၁၃၂၄ ခုနှစ်၊ဆောင်းတွင်းရက်တစ်ရက်၌ ဘီလင်းမြို့နယ်မှ ငါးကြင်းအင်းဆရာတော်သည် ဘုရားတည်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံရန် ကော်သူးလေ တပ်မဟာ (၅) သို့ကြွရောက်လာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဘုရားတည်၊ကျောင်းဆောက်၊ ရှင်ပြု,ရဟန်းခံဘာသာရေးကိစ္စမှန်သမျှကို ကော်သူးလေအဖွဲ့ထံတင်ပြရသည်။၎င်းတို့သဘောတူခွင့်ပြုမှုသာ လုပ်ခွင့်ရသည်။ ခွင့်မပြုက လုပ်ခွင့်မရကြပေ။ တပ်မဟာ(၅) သို့ ငါးကြင်းအင်းဆရာတော်ရောက်ရှိချိန်၌ တပ်မင်းကြီးလင်းထင်မရှိ၍ ရုံးခန်းအတွင်းရှိတပ်မင်းကြီး၏ ကုလားထိုင်တွင်ထိုင်၍ စောင့်နေသည်။ (၂) နာရီခန့်အခါတွင် တပ်မင်းကြီးလင်းထင်ရောက်လာသည်။ ၎င်း၏နေရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးထိုင်နေသည်ကိုတွေ့၍ ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်သွားသည်။ “ရာရာစစ ဒင်းကများ ငါ့နေရာကိုထိုင်ရဲတယ်၊သိကြသေးတာပေါ့” ဟုကြိမ်းဝါးကား ခါးကြားမှခြောက်လုံးပြူးသေနပ်ကိုထုတ်ကာ ဘာမှမပြောဘဲ ငါးကြင်းအင်းဆရာတော်ထံချိန်ရွယ်၍ … Read more
တင်ပါးယား၍ ကုတ်မိရာမှ နေ့ချင်းညချင်း ဘဝပြောင်းသွားရသည့် မိန်းကလေး
November 21, 2020 by Online Hartha
တင်ပါးယား၍ ကုတ်မိရာမှ နေ့ချင်းညချင်း ဘဝပြောင်းသွားရသည့် မိန်းကလေး ကျွန်မ၏ တင်ပါးကို ယားလွန်း၍ ကုတ်မိသည်။ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဘေးမှာရှိသည် ။ တစ်ယောက် က မော်လီ တစ်ယောက်က ခင်မြရည် ဖြစ်သည် ။ ကျမ ယားလို့ တင်ပါးကုတ်မိတဲ့ အခါ သူငယ်ချင်း မော်လီက ဓာတ်ပုံ ဖျတ်ခနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့…၊ ပလွတ် ဆိုပြီး အင်တာနက် ချိတ်ပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ် တင်ချလိုက်သည် ။ ကျမ တို့ သုံးယောက် အတူရှိသည် ဆိုတော့ tag တွဲတင်လိုက်သည် ။ ဆေးထိုးလိုက်ပီ ဟု မော်လီ က ရေးတင်လိုက်သည် ။ ခင်မြရည်က အရင် like ဝင်လုပ်သည် … Read more
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ကောင်လေး နဲ့ အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ
November 16, 2020 by Online Hartha
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ကောင်လေး နဲ့ အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ သင့် ဘော်ဒါ တစ်ယောက် မနေ့ညက ကောင်မလေး ချောချောလေးနဲ့ တူတူ အိပ်ခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ သိသာလွန်းနေမှာပါ။ လေလေး တစ်ချွန်ချွန်နဲ့ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ပြုံးနေမှာပါ။ ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် သင့်ကိုလာပြောပြနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမ တွေ ဆိုရင်ရော?? သင်ဘားမှာတွေ့တဲ့ မိန်းကလေး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကောင်မလေး၊ Gym က ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေး၊ သူတို့ မနေ့ညက ဆက်ဆံခဲ့ရင် သင် ဘယ်လို သိပါမလဲ?? ဆံပင်ကောက်နေတာလား?? Bite Mark တွေလား?? အဲဒီ ရုပ်ရှင်ထဲက လက္ခဏာ တွေဟာ တကယ်တော့ မှားနေပါသေးတယ်။ … Read more